U-Antony Raj Jayamani umlandeli wethu ovela kwi-Linkedin | Uthande i Dubai!
Iingcebiso ze-7 zokuphuhlisa izakhono eziqhelekileyo zoLawulo
E papashwe ngu Inkampani yeSixeko sase Dubai at Ngamana 18, 2019
Umlandeli ka-Antony Raj Jayamani ovela ku-Linkedin. Uye wakwazi ukuthumela kuthi i-imeyile ekhawulezileyo kunye neyakhe Ifoto ehlaziyiweyo yaseDubai.
Ndiza apha ukuya eDubai kwaye ndaqala umsebenzi wam ngoMatshi 5th 2018. Ngelixa ndiza dubai, Bendiyinto zero kwaye ndingenalo nolwazelelo olulodwa malunga nehlabathi. Emva konyaka uDubai endenza indoda kwaye wandinika ukuzithemba ngakumbi emva koko wafumana ulwazi ngakumbi. UDubai wandibonisa ukukhanya okuvela kwindawo emnyama ebomini bam. Ngoku iba ngathi likhaya lesibini, ndiyakuthanda ukuhlala eDubai. Ndinqwenelela yonke impumelelo ebalaseleyo ekukhuleni kweDubai. Ndinombulelo ongazenzisiyo ngeli nqanba ukubhenca ukufundiswa kwam.
Kutheni i-Antony ikhetha i Dubai?
Akukho mazwi anokuchaza iDubai kunye nenkokeli yayo. I-expats ezininzi ezivela eIndiya zityelele eDubai ubuncinci amaxesha e-2 kwaye unqwenela ukuba bangaya baphile kwaye basebenze apho. Yonke into igqibelele kwaye icocekile. Kunje ngezulu lomhlaba.
Abantu abaninzi abonwabileyo. Sonke sinqwenela ukuba amazwe ethu ajongeke njenge-United Arab Emirates. Ngaphezu koko, ulawulwe njengeNkokeli yeDubai Ukulandela njengomzekelo wendlela ekufanele ukuba babe nabemi ngayo. IDubai inalo lonke iLizwe kulo. Owu, Dubai Yintoni Omuhle indawo ukuchitha ubomi bakho kuyo. Sonke sinqwenela ukuba sifumane uMsebenzi apho njengoMyili weGumbi okanye umphathi.
Kukho Amandla amaninzi amaninzi apho!
IDubai yidolophu yase ishishini, ngelixa kusithiwa kunjalo xa ubhabha uye ezantsi eDubai kwaye usebenze apha. Awusoze uzive ulilolo, abantu banobubele kakhulu, bafundile njalo njalo. Ukuqala ngokuzingela umsebenzi kunokuba yinto exakekileyo, ngenxa yokhuphiswano kwimarike yanamhlanje. Kwaye okukhokelele abantu ukuba bakhethe isikhundla ngobulumko kwaye abantu abanolwazi banokunikwa ukhetho ngakumbi ngomsebenzi ongcono.
Kwaye okwangoku ayizukukonwabisa, ke ukuba ungumtsha, zilungiselele kakuhle, ube ubuncinci ulungele ukusebenza ukuze ezinye iinkampani zikwazi ukubonelela ngesixa semali endaweni yokufaka isixa esikhulu sokuqesha ophakathi, xa ufuna umsebenzi eDubai qiniseka ngeiwebhusayithi zokwenyani. Ezinye iiwebhusayithi ze-bogus zingakubambisa phantsi kwamaphiko azo kwaye zibuze imali, ngelixa akukho nkampani eza kucela imali nayiphi na uhlobo lokuqashwa.
I-Dubai akulula ukuba ufumane umsebenzi owufunayo
Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, ndingathi ayisiyiyo Kulula umhlaba ngomsebenzi owufunayo, endaweni yoko thatha isikhundla sokungena kwinqanaba leliphi ishishini olithandayo. Ke emva kokuba ugqibe isivumelwano sakho sokuqala kunye nabo zama ukufaka esinye isikhundla kwi-UAE. Kwaye ngokuqinisekileyo uya kufumana isikhundla sakho esinqwenelayo emva kokuba unesampulu yenani lamava eDubai.
DUBAI, intombazana yam amehlo, unguye Dream, Unique, Bzihle,
Aukutshabalalisa kunye Inspiring.
Sonke siluthando Dubai City!
IDubai yenye yezona izixeko zeshishini kule mihla eMbindi Mpuma. Ngumdibaniso we Indian kwaye Pakistani, ngaphezulu, abantu baseIran kunye bakwiiPhilippines abafudukayo. Esi sixeko siyi-modern, futuristic and innovative environment kunye neendawo ezahlukahlukeneyo malunga nantoni na.
Kuyamangalisa ukubona inkcubeko ezininzi ezahlukeneyo kwindawo enye kwaye ufike kuzo Yazi inkcubeko yama-Arabhu kwangaxeshanye.
Zininzi iindawo esixekweni sokuphonononga kunye nokuzonwabisa. Namhlanje siza kufumana iindawo zokutyela kunye nemivalo. Indawo enomdla kakhulu yiDubai Marina, indawo ezele ziindawo zokudlela ezimnandi kunye nemivalo enembono entle yehotele entle iBurj Al Arab. Unokuziva imeko ye-Arabhu engaqhelekanga ukuzama ukutya okuqhelekileyo kwesiArabhu ngelixa une-shisha -isixhobo sokutshaya sendawo kunye nezinye iincasa. I-Barista yindawo yesibini apho igcwele khona iibha ezimnandi kunye neekhefi apho unokonwaba khona ukuxubana nabantu abaninzi kwihlabathi liphela kwaye ube nexesha elimnandi.
Kukho izinto ezininzi zokwenza e Dubai
Indawo yesithathu yiqela Armani e Burj Khalifa. Iklabhu yokuziqhelanisa enendawo elungileyo, umculo omnandi kunye neencasa zamnandi. Kwaye masingalibali i-Desert. Ukuba awuyanga kwi Intlango emva koko awuyi eDubai. Ukuqhubeka kwi entlango yasasaweni lelinye lamava amakhulu. Ukutsiba ngenqwelomoya emotweni, ukhwele inkamela, isidlo sangokuhlwa ngelixa ubukele umdaniso waseArabhu amava angalibalekiyo ekufuneka eyenziwe xa undwendwela iDubai.
Kodwa malunga noku, ndiza kutyhila kwinqaku elilandelayo apho Siya kufumanisa intlango kwaye kunjani ukuthenga kwiDubai. Esi sisixeko sifihle iindawo ezininzi ezimangalisayo neziganeko zokuphononongwa. IDubai sesinye sezona zixeko zinomdla kwaye zimi kakuhle kwihlabathi.
Hlalani nilungelelanisa i-adventure ezayo!
IDubai yaziwa njenge Isixeko seshishini, ngelixa kusithiwa izigidi zabantu zibhabha zisiya eDubai ngemisebenzi okanye amashishini amancinci kwaye abasokuze bazive bebodwa ngokwemvelo iba likhaya labo lesibini. Abantu banobubele kakhulu, bafundile kwaye kuninzi kakhulu ekufuneka bejonge eDubai.
Yintoni eyenza i Dubai idume kangaka?
IDubai iyakhula imihla ngemihla, kule minyaka iguqukayo kakhulu, I-Expo 2020 ingaphambi kokuba amazwe angaphezu kwe-190 azakuthatha inxaxheba nge-Okthobha elandelayo ye-2020. Ukwakha iMetro eDubai kwenza ukuba ukuhamba kube lula ngakumbi, ukugcwala kwezithuthi ezindleleni kukhokelela ekungathatheni abantu kwaye bakhethe ukungena kwimetro. kunokukhwela ibhasi okanye iteksi, ngaphandle kwaleyo i-Dubai inolwakhiwo lwanamhlanje kunye nobusuku obumnandi bokuphila, iindawo zokutyela ezininzi ezinokuzikhetha abantu e-Dubai yi-ukutya-time-timeie, ungazama ukuzama ukutya okuninzi okuvela kwihlabathi liphela.
IDubai yaziwa njengelona dolophu likhuselekileyo emhlabeni, kanti amaqondo olwaphulo-mthetho ethelekiswa ngokuthelekisa, kwaye i-Dubai kuphela kwesona sixeko emhlabeni ukuba ne-Exclusive Supercars, ibuyela emva ngexesha apho abantu base-Dubai bethanda kakhulu iimoto, ukuyenza ibangele umdla ngakumbi iDubai Mapolisa Bongeze i-supercars kwiinqanawa zabo ezibandakanya i-Buggati, i-Aston Martin, iRoll Royce, nokunye okuninzi. IDubai ikwabizwa ngokuba ngu-hub wodumo, lo gama uMnyhadala woMdlalo bhanyabhanya, uMthendeleko weMbhiyozo usenzeka qho kwikota.
Abadlali kwihlabathi lonke eligeza uthando ngeDubai kunye needilesi njengekhaya labo lesibini, beza apha bezokuthenga, bahlangane kwaye babingelele nabalandeli kwaye badubule ngemiboniso bhanyabhanya ikakhulu kwiindawo iBreathtaking ezifana neBurj Khalifa, Burj Al Arab, kunye neJumeirah Iibhishi, Ngaphandle kwe-showbiz, Bancinci kuthi bayazi ukuba i-Dubai iyenzela isisa esikhudlwana, abantu apha bakholelwa ukuba ukwabelana kuyakhathala, bathanda ukunceda abahluphekileyo ekuhambeni, ngalo lonke ixesha bedibana naziphi na izinto ezigwenxa abafikelela kuzo kungekabikho xesha lokuqiniseka ukuba bakhuselekile.
Umlawuli waseDaibha uHH Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum kunye nomdlali waseHollywood uTro Cruise (Shishino lwa se Arabia)
I-Dubaï isenzelwe abafuna umsebenzi kuphela?
Abafuna umsebenzi eDubai banokuphila kwaye batye simahla kwezinye iindawo, ngelixa abantu baseDubai bezolulele iingalo zabo ukunceda abafuna umsebenzi kangangoko banako, abantu banokuqalisa ukucinga ukuba yinto yokwenene, asiyomntu wonke xa ndisithi simahla, kukho abantu abathile abaphethe abantu abafuna umsebenzi, Oku kubonisa ubuntu ebantwini abazama ukunceda abasweleyo.
Okanye ukuba kufuneka uhlale kwindawo ye-bachelor unokhetho oluninzi Ngamaxabiso aphantsi ngenkonzo yokuhluza, kukho iihostele ezikhoyo kwezinye iindawo umsebenzi unokuhamba okwethutyana kuxhomekeke kwiiVisa zakho, ngaphambi kokuba ubhabhe uye e-Dubai, kufuneka wenze uphando oluchanekileyo ngokukodwa kubantu abazifumana bengabasemzini esixekweni, kuba abo banabahlobo okanye usapho banokuvana ngokulula.
Kuya kufuneka uyazi nemithetho yendlela yaseDubai, ulumke xa uwela umhambi ngeenyawo unokugqibela ukuhlawula isohlwayo sokungathobeli imithetho, ukulahla inkunkuma endleleni, ukutshicela kwiindawo ezinkulu kunokukunika engxakini, ke ulumke uphephe imisebenzi enjalo, Ngalo lonke ixesha kufuneka uphathe ikopi ye-visa ube kwicala elikhuselekileyo njengoko amapolisa anokukusa elugcinweni lwawo ngenxa yokungagcini amaxwebhu akho afanelekileyo de ube ube ne-Emirates ID, uya kuyifumana emva kokufumana umsebenzi, ezinye zezinto ezenziwayo nezingafaniyo.
Ungaqala njani ukukhangela umsebenzi kwi-UAE?
Ukuqala ngokuzingela umsebenzi kunokuba yinto exakekileyo, ngenxa yokhuphiswano kwimalike yanamhlanje ekhokelwa ngabantu ukuba bakhethe isikhundla ngobulumko, kukho abantu abaphuma kumazwe ahlukeneyo abanetalente eninzi, izakhono kunye nabantu abanolwazi banokunikwa ukhetho olukhethekileyo luyinyani.
Ke, logama nje kuya kuba nzima ukonwatyiswa, ke ukuba uyakuzilungiselela kakuhle, yiba ubuncinci basebenze ulungile ukuze ezinye iinkampani zibonelele ngesixa semali endaweni yokufaka isixa esikhulu ekuqeshweni kweengcali eziphakathi, kwaye abanye abasebenzi baphinde balandelele abafuna umsebenzi eKuwait.
Okokugqibela ngaphandle kwalonto xa uzingela umsebenzi eDubai qiniseka ngeiwebhusayithi zokwenyani, ezinye iwebhusayithi ze-mbumbulu zingakubambisa phantsi kwamaphiko azo kwaye zibuze imali, ngelixa zingekho iinkampani ezizakucela imali naluphi na uhlobo lokuqeshwa ukuba uzibona ukwenye yezi meko zilumkele.
Ukuphepha imisebenzi enjalo kufuneka uqiniseke Uphando iiofisi zabo kwaye zifunde uphononongo kwi-intanethi ukuze uqiniseke kwaye uya kufumana ezinye iiarhente zomsebenzi ngelixa balungiselela udliwanondlebe lwabagqatswa abafanelekileyo ngokwemisebenzi yakho enxulumene nemvelaphi yakho kwaye ucele ipesenti yomvuzo wakho wokuqala kuphela xa usayina incwadi enikezela, leyo yinto elungileyo yokunyaniseka, kuba nabo banamathele kwiinkampani zenkampani. Bawenza lula umsebenzi wakho, ke ngabantu abenyani abazikhathazi ngobuqhetseba apha njengoko b kunjalo apha ukunceda iiFreshers.
Sebenzisa kuphela izikhundla zomsebenzi e-Dubai!
Uza kubona neenkonzo zokuhanjiswa kweCV apha UAE , Ndincomela ukuba mandingayikhethi leya ngoba basasaza i-CV yakho kwi-imeyile ngokubanzi ii-id zenkampani ezingahleliwe ziya kufumaneka kuzo iiwebhusayithi okanye iiakhawunti ze-LinkedIn, ngelixa ungenza nezinto ezinjalo ngokufumana iidilesi ze-imeyile kwiiwebhusayithi zazo ezilandelayo.
Kule mihla kwi-UAE Ukudala iipotifoliyo ezingeyonyani ibe yinto, evelisa ingeniso ngabantu abamsulwa, abo bantu bavela kwizixeko ezahlukeneyo bawela kumgibe wabo ngokulula, bengakhange bacinge nje ukuba bahlawule isixa esikhulu kubuqhetseba ndilindele umsebenzi wokuba ubuyise, kuncinci abakwaziyo ngobuqhetseba iDubai ihlala ilandelela abo bantu kwaye ithumele imiyalezo yokulumkisa kwi-UAE yonke ukuze isindise abantu kwimisebenzi yobuqhophololo e-Dubai.
Ngaphezulu kwayo yonke into endiya kuyithetha akukho lula ukuba nomhlaba ngomsebenzi owuthandayo, endaweni yoko thatha isikhundla sokungena kwinqanaba leliphi ishishini olithandayo, emva kokuba ugqibe isivumelwano sakho sokuqala nabo zama ukufaka esinye isikhundla kwaye uqalise uphando lwakho Ngokuqinisekileyo uya kufumana isikhundla osinqwenelayo, amava okufundisa izinto ezininzi, kuya kukhulisa ukuzithemba kwakho, uya kuphuhlisa izakhono zakho zomsebenzi kunye nokunye okuninzi. Ngokunjalo, nceda abanye, wenze uthungelwano, dibana nabantu abatsha mihla le ufuna uncedo kubo kwaye nakanjani na uya kufuna umhlaba eDubai, e-UAE.
Ngapha koko, ukuba ngaba ukhona umsebenzi ohambelana neprofayili yakho, Nceda uzame ukubetha umphathi we-HR ASAP. Kuya kuba ulungele ukunika iinkonzo zakho kwintengiso kunye nentengiso / inkonzo yokhathalelo lwabathengi / ukuthengisa imisebenzi okanye nantoni na efanelekileyo yomsebenzi owunikiweyo.
Uninzi lwe iphupha labathumileyo kukusebenza kumazwe e-GCC ukunyusa ezabo career amathuba. Kwaye kuya kufuneka ukuba ube nomnqweno wokusebenza naphina kumazwe e-Gulf iindawo ezinjengeDubai / Qatar / Oman / Abu Dhabi / Bahrain / Kuwait njalo
Logama nje banokunika umsebenzi kwingingqi yeGulf. Ke, ukuba ube wenze isicelo semisebenzi kwi-intanethi yamasango kwi-4 / 5 yokugqibela yeminyaka ngaphandle kwesiphumo. Zama ukubetha kancinci kancinci. Layisha kwakhona kwakhona kwiqela lethu kwaye siqale ukukhangela phambili ukufumana impendulo enhle evela kwi-"Dubaicitycompany".
Ngexesha endandihlala eDubai, yayithathwa njengekhaya
Kwadlula iminyaka, yaqhekeza emathanjeni am.
IDubai ayizange ithathwe njengesiphako.
Yonke imizuzu echithwayo yayixatyisiwe.
Kwakufana nokubukela intombazana encinci ibonakala ibe ngumfazi ococekileyo
Abantsundu & nabelungu, abancinci nabadala, bonke babenentliziyo entle bebukele le nto umfazi uyakhula.
Njengamaza olwandle aqabukayo elunxwemeni.
UDubai wazisa lonke uthando phambili.
Yiza e Dubai
- Umfundi ogqitywa ngokutsha? Uya kuba yinkanyezi ephakama.
- Umgangatho ophakathi? Usapho lwakho luya kukhuseleka kwiinkcubeko zethu zokukhuthaza.
-Umdala? Ixesha lokuvuna Izibonelelo zobomi bexesha lobuchule.
Nokuba uphi namhlanje, Siyakholelwa ukuba unokwenza umohluko namhlanje ngokusijoyina eDubai. IsiXeko sethu esihle- apho intlango idibana khona isibhakabhaka kunye ne-Innovation ikhokelela kwiinkonzo- likhaya lakho elilandelayo, intshukumo yakho enkulu.
Yiza kwaye ube yinxalenye yeSixeko esinyani yakhelwe ukutyhubela iminyaka yokufudumala kosapho, uvuyo, ubunzima, ukomelela kunye namava omongameli ukwenza isiseko esomeleleyo sobomi obucekeceke kubo bonke abesilisa nabasetyhini abasebenza nzima.
Joyina nathi namhlanje!
Ngethemba uya kuthatha isigqibo U-Antony Raj Jayamani umlandeli wethu ovela ku-Linkedin ukuza kwi IUnited Arab Emirates. Kwaye Inkampani yeSixeko sase Dubai iyahlangabezana nolindelo lwakho malunga ukubonelela ngesikhokelo sokusebenza kunye nokuhlala kuMbindi Mpuma.
Landela i-Dubai City Inkampani kwi-Linkedin efana:
Inkampani yeDCC ngoku ukubonelela ngolwazi lokufumana. Iqela lethu ligqibe ekubeni longe ulwazi ngolwimi ngalunye Imisebenzi e-Dubai Guides. Ke, unale nto engqondweni, ngoku unokufumana guidesIingcebiso kunye nomsebenzi kwi-United Arab Emirates ngolwimi lwakho.